Ejikọtara American ngwa nju oyi friza, Igbe friza N'ihi Garage - Nenwell
mepụta ihe bara uru karịa ngwaahịa
Nenwell nwere zuru elu nke elu larịị na ume savinng friji ngwaahịa iji kwekọọ ọ bụla gị speical arịrịọ
Ihe karịrị afọ 20 nwere ahụmịhe na friji gbara akwụkwọ. Nenwell na-enye ndị ahịa niile azịza dị mma na nke doro anya na friji na mpaghara ụlọ nkwari akụ. Anyị na-emezu nkwa anyị mgbe niile nke "Iji mepụta uru karịa ihe ndị ahịa chọrọ".
Bega n'ihu Market
na iche iche
Site na ọhụụ obosara nke ụwa na mmetụta uche dị nro, Nenwell mepụtara ngwaahịa ọhụrụ ma ọ bụ ahaziri nke ọma na ndị ahịa. Bega n'ihu ahịa, iji merie karịa ahịa ahịa na uru ya na ndị ahịa ọnụ.
Ọhụụ International, Metụ Mmụọ Nsọ
Na-ekere òkè n'ụdị ụlọ nkwari akụ mba dị iche iche na ihe ngosipụta ngwa ngwa kwa afọ. Nke a na-eme ka anyị bụrụ ọkachamara na nlezianya na ọnọdụ ahịa.
mba zuru ụwa ọnụ,
zuru ụwa ọnụ na-ere ọkụ!
Nenwell nwere ikike ị nweta ohere nyere Nenwell ike ịkwado ma gosipụta ngwaahịa zuru ụwa ọnụ na-ere ọkụ maka ndị ahịa na oge nyere ndị ahịa nnukwu ngwaahịa ozi ngwaahịa na oge mbụ. Inyere ndi ahia aka iburu uzo ahia mbu.
imekọ ihe ọnụ àmà enweghi ngwụcha!
axial ofufe moto
shaded poolu fan moto
waya tube condenser
ụzọ mgba ọkụ
ụkwụ nwere ike ịgbanwe
Efficiencyzụ ahịa ahịa na arụmọrụ dị elu - ikike 500 na-ebubata ngwaahịa na ihe karịrị 10,000 ngwaahịa ngwa ngwa na ngwa. Gụnyere ngwa ngwa ụlọ, akụkụ na akụrụngwa.
Comprehensive friji ihe ngwọta
ụlọ nkwari akụ & ụlọ ahịa!
Ọtụtụ afọ nke ọkachamara omume, a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwaahịa nhọrọ na ezi ụlọ ọrụ analysis na-enye Nenwell ngwa ngwa nhọrọ ka nwere ike ikwu kacha adabara green ike na-azọpụta friji ngwaahịa. Iji bulie ngwa ahịa dị mma, chekwaa ọrụ na ohere! Chepụta eserese eserese maka ndị ahịa ịnye ngwọta kacha mma.
Zụlite ọdịnihu dị mma na
Ugboro 10 ire n'ime afọ atọ
N'afọ ndị gara aga, Nenwell enyela oge na-enye aro maka mmepe ahịa dị mma maka ndị ahịa dị iche iche, na-azụ ahịa ndị ahịa na ahụmịhe ngwaahịa friji, na-enyere ndị ahịa aka ngwa ngwa biri òkè ahịa! Offọdụ ndị ahịa anyị enwetala ngwa ngwa ire ngwa ngwa n'oge dị mkpirikpi site na nkwado na Nenwell!
Anyị nwere obi ụtọ na nke a ma were nke a iji nyeghachi ndị mmadụ na-elekọta Nenwell.The ịga nke ọma nke azụmahịa anyị na-eguzosi ike na iguzosi ike n'ihe, a pụrụ ịdabere na ya, ntụkwasị obi na nkwanye ùgwù n'etiti ndị niile nọ na ụlọ ọrụ, ndị ahịa anyị na azụmahịa. Site n'ịghọta mkpa mmekọrịta dị, anyị na-ewulite njikọ siri ike n'etiti ndị ahịa anyị na ndị na-ebubata ya, na-elekwasị anya n'uto na ihe ịga nke ọma.